တစ်ချို့တွေ ပြောနေတဲ့ Facebook SEO ဆိုတာ .... ? - Thaw Zin
တစ်ချို့တွေ ပြောနေတဲ့ Facebook SEO ဆိုတာ …. ?
Facebook Users တော်တော်များများက တစ်စုံ တစ်ခုဆို Facebook ပေါ်မှာပဲ ရှာလေ့ ရှိပြီးတော့ Browsers ဖွင့်ပြီး Google မှာ ရှာလေ့ မရှိကြဘူး၊ ဘယ်လို ရှာရမှန်းလည်း တစ်ချို့တွေဆို မသိကြဘူး။ သူတို့ သိတဲ့ ဆိုင်နာမည်ဖြစ်ဖြစ် company နာမည်ဖြစ်ဖြစ် Facebook ပေါ်တက်ပြီး တန်းရှာကြတယ်။ Facebook ကို Search Engine တစ်ခုလိုမျိုး သတ်မှတ်ပြီး တစ်ချို့ Users တွေ အသုံးပြုကြတယ် အဓိက အားဖြင့် ကျတော်တို့ နိုင်ငံမှာပေါ့။
အဲ့လိုမျိုး တစ်ချို့ user level တွေက Facebook ကို Search Engine ပုံစံ သုံးနေကြလို့ များ SEO ထဲကမှ Facebook SEO ဆိုပြီး ဖြစ်လာသလား။ တစ်ချို့ Digital Marketing လုပ်နေတဲ့ Social Marketers တွတောင် Facebook SEO ဆိုတာ သူတို့ လုပ်တတ်ရမှာလား SEO သမားက SEO ပိုင်းရာ လုပ်ရတာလာ ဆိုပြီး ပြောဆိုနေကြတာတောင်တွေ့ ှိရပါသေးတယ်။
တစ်ခါ တစ်ခါ Clients တွေ ကျတော်ကို မေးတာတွေ ရှိကြပါတယ် “ကိုသော်ဇင် ရဲ့ SEO Services မှာ Facebook SEO ပါလား/ လုပ်ပေးရဲ့လား? တစ်ချို့ Training တွေမှာဆိုလည်း အဲ့လိုမျိုး ပဲ “SEO မှာ Facebook SEO ဆိုတာကော အစ်ကို ဘယ်လိုလဲ”။
အဲ့မေးခွန်းကို ကျတော်ကိုယ်တိုင် မေးချင်တယ် Facebook SEO ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ၊ Google မှာ ရှာတဲ့ အခါ ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Page ကို ဖော်ပြအောင် လုပ်တာလား ဒါမှမဟုတ် Facebook Search Bar မှာ ရှာတဲ့ အခါ ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Page ကို ဖော်ပြအောင် လုပ်တာလား၊ ၂ မျိုးစလုံး ဟုတ်တယ်ပေါ့ Google ပဲ ရှာ Facebook ပဲ ရှာရှာ Facebook Page ကို ဖော်ပြချင်တယ် အဲ့လိုမျိုးလား?။ ရိုးရိုး SEO နဲ့ Facebook SEO ဆိုပြီး အဲ့လိုတွေများ ရှိလား ဘာတွေ ကွာသလဲပေါ့… နော်ကပြီး Facebook SEO ဘယ်လို လုပ်မလဲပေါ့။
တကယ်တော့ ရှင်းရှင်းလေးပါ SEO ရဲ့ Meaning က Search Engine Optimization ပါ။
“Facebook is not Search Engine. Facebook is Social Network.” Facebook က Search Engine မဟုတ်ပါဘူး သူက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချိန်ဆက်ပေးတဲ့ Social Network သာဖြစ်တာပါ။
တကယ်လို့ Google မှာ ရှာတဲ့ အခါ ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Page ကို Google Search Result ဖော်ပြချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဖော်ပြအောင် လုပ်တဲ့ Page Configuration နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Tips & Tactics လေးတွေတော့ ရှိပါတယ် ဒါမယ့် Facebook Page ကို သီးခြား SEO လုပ်တယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ Facebook Search ကလည်း ရှာတဲ့သူရဲ့ friend networks, တွေနဲ့ အခြေခံပြီး ဖော်ပြတာ တွေ ရှိတဲ့ အတွက် Facebook ရဲ့ Search Result က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ တကယ်လို့ နာက်ပိုင်း Facebook က Google လိုမျိုး Search Result ပုံစံ လုပ်လာရင်တော့ Facebook SEO or FEO (Facebook Engine Optimization) ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာမှာပေါ့….. ။ ဒါမယ့် တစ်နေ့ တခြား အပြောင်းအလှဲတွေလုပ် နေတဲ့ Facebook ရဲ့ Future က Messaging ဖြစ်လာမယ်လို့ ဇူကာဘက် က Official Announced လုပ်ထားပါတယ်။
လက်ရှိ တစ်ချို့ နိုင်ငံတွေမှာအသုံးပြုလို့ ရပြီဖြစ်တဲ့ Facebook Search Ads တော့ ရှိပါတယ်။ ဒါမယ့်လည်း FB Search Ads က SEO ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ဆက်စပ်မှု့မရှိသလို, PPC လိုမျိုး Keywords တွေ ထည့် သုံးလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ချို့ IT ပိုင်း ဆိုင်ရာ နားမလည်တဲ့ Clients တွေကို Facebook Page နဲ့ Website ဘယ်လို ကွာတယ်ဆိုတာတောင် တော်တော်ကြီး အချိန်ပေးပြီး ရှင်းပြနေရတာ SEO မှာ Facebook SEO Service ဆိုပြီး Hot ဖြစ်လာမှာစိုးလို့ …..ပါ။
ကျတော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook က top ဖြစ်နေတော့ SEO တောင် Facebook SEO ဆိုပြီး ဂျင်း Agency တွေဖြစ်လာမှာကိုလည်း သတိထားစေချင်ပါတယ်။
Get contact to 09453198018 for powerful SEO Service.